Iyo nyowani iPhone ichavandudza yemukati yekufamba yekutenda kune nyowani kanyanga | IPhone nhau
Iyo iPhone nyowani ichavandudza yemukati yekufamba nekutenda kune nyowani nyowani
Mumwe wevanoongorora ane huwandu hwepamusoro hwekururamisa paanotaura nezvezvirongwa zveApple zvenguva yemberi, Ming-Chi Kuo, aburitsa gwaro nyowani revashambadziri maanotaura nezve iPhones ichatangwa neApple muna2019 na2020. chirevo, iyo iPhone yegore rino, ivo vacharatidza shanduko huru muchimiro chenyanga.
Iyi shanduko inokonzerwa zvese nekufambira mberi muiyi tekinoroji uye kune vatsva vanopa. Iyo nyowani 2019 iPhones inoshandisa iyo nyowani yakashandurwa kanyora chimiro. Iyo iPhones iyo Apple yakaburitsa gore rapfuura, iPhone XR, iPhone XS uye iPhone XS Max, Ivo vanoshandisa inoyerera yekristaro polymer tekinoroji mune yavo kanyanga.
Zvese zvinoratidza kuti iyo iPhone haigamuchire 5G kusvika 2020
Iko shanduko kune yakagadziriswa antenna chimiro muiyo iPhone 2019 ichawedzera mutengo wayo nepakati pegumi kusvika makumi maviri muzana, nekuda kweyekuenderera kweyakagadziriswa iyo yainogamuchira kunatsiridza mashandiro ayo. Rudzi rutsva rweantena, Izvo zvichavandudza mashandiro eiyo iPhone mune yekunze kufamba.
Kuti uwane Nakidzwa ne iPhone ine 5G modem isu tichafanirwa kumirira kusvika 2020, zuva iro zvinhu zvese zvinoita sekuratidza, Apple ichatanga kutora tekinoroji iyo nhasi inowanikwa mumaguta mashoma kwazvo pasi, kunyangwe vamwe vagadziri vatanga kuvhura mafoni anoenderana nehunyanzvi uhu.
Mushure mokunge chibvumirano chakasvitswa naApple neQualcomm, iyo yekupedzisira ichave inotarisira ipa Apple ine 5G modems, kunyangwe makuhwa akasiyana siyana achinongedzerawo Samsung semunhu anogona kupa, chimwe chinhu chingangoita sezvo Apple isingade kuvimba chete nemutengesi mumwe chete.
Mavhiki mashoma apfuura zvakataurwa kuti Huawei yaingopa chete yayo 5G chip kuna Apple, chimwe chinhu chakazorambwa nekambani yeAsia, pamwe 'Nekuti vakomana veCupertino vanozoramba chipo ichocho, nekuda kwematambudziko ekambani yeAsia nehurumende yeAmerica.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Iyo iPhone nyowani ichavandudza yemukati yekufamba nekutenda kune nyowani nyowani
European Union inoferefeta Apple yeSpotify kukwikwidza kukwikwidza
UK yatogamuchira kare Apple Pay kubhadhara mamwe mabasa ehurumende